Manan-tantara ny zava-bitan’ny Barea satria sady nandresy an’i Nizeria izay ekipa faha telo eto Afrika no tafiakatra amin’ny dingana ampahavalon-dalana amin’ny CAN. Ohatra lehibe tokony horaisintsika Malagasy tamin’ireny dia ny firaisankina. Satria rehefa miaraka tokoa dia maharesy ny zava-drehetra. Tsy nisy fanavahana ara-piaviana ka hilazana fa ny mpilalao avy any amin’ny faritra itsy no tena namiratra fa ny mpilalao rehetra no naira-niezaka ka nahazoana ireny vokatra ireny. Ary isika Malagasy rehetra no niaraka nitempo ka nanohana azy ireo. Tsy nisy ihany koa fanavahana ara-politika ka nilazana fa i ranona na i ranona no antom-pandresena satria dia efa nanomboka tamin’ny fitondrana teo aloha no nahazoana ny tapakila hilalaovana izao CAN izao. Ary ny fitondrana teo aloha ihany koa no nahitana ireo mpilalao sy mpanomana ny ekipam-pirenentsika ankehitriny.
Ny faniriana dia enga anie ho fototra hiaingantsika hiara-dia ka hibanjina ny ho avy ny fandresena tahaka ireny. Raha i Paul Kagame, izay vahinintsika vao tamin’ny fetim-pirenena tokoa mantsy no alain-tahaka, dia ny fampihavanam-pirenena no nataony voalohany vantany vao tonga teo amin’ny fitondrana izy. Najanony tanteraka ny fifanavakavahana nisy teo amin’ny foko TUTSI sy HUTU tao Rwanda. Ary natambany avokoa ny hevitra rehetra ka nibanjina manokana ny nahasoa ny vahoakany rehetra izy fa tsy nanana hevitra hamaly faty na hanimba ny olon-kafa. Mino sy manantena isika rehetra fa manomboka izao dia hiray hina isika Malagasy, ka fahavalo tokana no hiadivana, dia ny fahantrana lalina mahazo antsika.